သင်မသိသေးတဲ့ ကလေးပေါင်ဒါရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ (၁၀) မျိုး
HomeKnowledgeသင်မသိသေးတဲ့ ကလေးပေါင်ဒါရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ (၁၀) မျိုး
ကလေးပေါင်ဒါ ဆိုရင် ကလေးတွေအတွက်ပဲ သုံးရတယ်လို့ လူအများစုက ထင်ကြပါတယ်။ ကလေးပေါင်ဒါက လူကြီးတွေအတွက်လည်း အများကြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။
1. မျက်တောင်ကို ထူစေတယ်။
မျက်တောင်ပေါ်မှာ mascara သုံးပြီးရင် ပေါင်ဒါအနည်းငယ်ကို ဘရက်ရှ်နဲ့ယူပြီး မျက်တောင်ပေါ် တင်ပေးပါ။ ပြီးတော့ mascara နောက်တစ်ထပ်နဲ့ မျက်တောင်ကိုပြန်ကော့ပါ။ အဲဒါဆို မျက်တောင်ကရှည်ပြီး ထူတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။
2. ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ဆွဲကြိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖြည်ပေးနိုင်တယ်။
ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ဆွဲကြိုးပေါ်ကို ပေါင်ဒါမှုန့် အနည်းငယ်ဖြူးပြီး ဆွဲကြိုးကို ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်ပေးပါ။ ဆွဲကြိုးရစ်နေတာ ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
3. ခေါင်းလျှော်ရည် အခြောက်အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်တယ်။
ခေါင်းက အဆီတွေထွက်ပြီး ခေါင်းလျှော်ဖို့ အချိန်မရှိရင် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးပေါင်ဒါ အနည်းငယ်နဲ့ ဆံပင်အမြစ်တွေ အထိရောက်အောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ ခေါင်းဖြီးလိုက်လို့ ရပါပြီ။ ဒီနည်းလမ်းက ခေါင်းနေ့တိုင်းလျှော်စရာ မလိုဘဲ ဆံပင်ကို ကျန်းမာစေ ပါတယ်။
4. အင်္ကျီပေါ်က ဆီစွန်းကွက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။
အင်္ကျီပေါ်က အစွန်းအထင်းတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင် ပေါင်ဒါမှုန့်ကို အင်္ကျီရဲ့ အတွင်းရော အပြင်မှာပါ ဖြူးထားလိုက်ပါ။ ပေါင်ဒါမှုန့်က ဆီတွေကို စုပ်ယူသွားအောင် တစ်နာရီကြာ ထားပါ။ တစ်နာရီကြာထားပြီး လျှော်လိုက်ရင် အစွန်းအထင်းတွေ ပျောက်သွားပါပြီ။
5. ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်ပေါ်က သဲတွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။
ကမ်းခြေရောက်ရင် သဲအစိုတွေက ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်မှာ ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ သဲကပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ပေါင်ဒါမှုန့်ကို ဖြူးပေးလိုက်ပါ။ ကလေးပေါင်ဒါက အသားအရေပေါ်က ဖယ်ရှားပေးလို့ သဲတွေ ခြောက်သွားမှာပါ။ ဖိနပ်မှာ သဲအစိုတွေ ကပ်နေရင်လည်း ပေါင်ဒါမှုန့်ဖြူးပြီး ဖိနပ်ကို ခါပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် သဲတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
6. အိပ်ယာခင်းတွေကို မွှေးပျံ့စေတယ်။
ပူအိုက်တဲ့ညတွေမှာ ကလေးပေါင်ဒါကို အိပ်ယာခင်းပေါ် ဖြူးထားပေးရင် ရနံ့မွှေးပြီး အိပ်ပျော်လွယ်စေပါတယ်။
7. သားရေအင်္ကျီတွေကို အသစ်အတိုင်း ဖြစ်စေတယ်။
သင့်ရဲ့ သားရေအင်္ကျီတွေကို အသစ်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ချင်ရင် ပေါင်ဒါမှုန့်ကို သားရေအင်္ကျီပေါ်ဖြူးပြီး အဝတ်စနုနုလေးနဲ့ လိုက်ပွတ်ပေးလိုက်ရုံ ပါပဲ။
8. တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အမွေးတွေကို လှပစေတယ်။
ပေါင်ဒါမှုန့်ကို ခွေးလေးတွေရဲ့ အမွေးတွေပေါ်တင်ပြီး ညင်သာစွာ ဖြီးပေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခွေးလေးတွေရဲ့ မျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းကို ပေါင်ဒါမှုန့် မဝင်အောင်တော့ ဂရုစိုက်ရမှာပါ။
9. ဖယောင်းနဲ့ အမွေးချွတ်ရာမှာ အသုံးဝင်တယ်။
ဖယောင်းကို မတင်ခင်မှာ ပေါင်ဒါမှုန့်ကို အရင်ဖြူးပေးရမှာပါ။ ပေါင်ဒါမှုန့်က အသားပေါ် ဖယောင်းစွဲစေပြီး ဖယောင်းနဲ့ အမွေးချွတ်တဲ့အခါ နာကျင်မှုနည်းစေပါတယ်။ ဖယောင်းကို ခွာလိုက်တဲ့အခါ အသားအရေက ချောမွေ့နေမှာပါ။
10. တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အညစ်အကြေးအနံ့တွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးလေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေက ကော်ဇောပေါ်မှာ အညစ်အကြေးစွန့်ထားရင် ပေါင်ဒါမှုန့်ဖြူးထားပြီး တစ်နာရီကြာ ထားပေးရုံပါပဲ။ အဲဒီအခါ အနံ့အသက်တွေ မရှိတော့ပါဘူး။